Ngifuna kubuyiswe ubudoda bami, kusho 'owesifazane' | News24
Ngifuna kubuyiswe ubudoda bami, kusho 'owesifazane'
Johannesburg - Owakhula eyintombazane kanti futhi ngokomthetho ungumuntu wesifazane ufuna kubuyiselwe ubulili bakhe bangempela.
Isakhamuzi saseLimpopo esineminyaka engu-21 ubudala esihlala eLuthuli Park eduzane nasePolokwane esicele ukubizwa ngelikaDenise ngoba sesabela ukucwentswa, sesihlinzwe isikhawu ezingaphezu kweyishumi.
UDenise usethathe imishanguzo eminingi kulandela ukuzalwa nobulili obubili.
Ngokusho kwe-website ye-Intersex eNingizimu Afrika, igama elithi intersex yigama okuchazwa ngalo abantu abazalwa nobulili obubili; obungatshengisi noma ungumuntu wesilisa noma ungowesifazane.
OLUNYE UDABA: Uphumela obala oncukumbili
Le nhlangano iphinde yathi abantu abazalwa benobulili obubili bahlinzwa obubodwa ngaphandle kwemvume yabo besayizingane okwenza kube nzima ukuba kwazeke kahle ubulili babo.
Umama kaDenise uthe izinkinga mayelana nobulili bengane yakhe zaqala ngesikhathi ezalwe nobhontshisi okhubazekile, okuyinto eyashiywo ngodokotela basePolokwane.
Lo mama uphinde wathi wanikeza odokotela imvume yokuba bahlinze ingane yakhe ubulili obubodwa ngesikhathi inezinyanga ezine izelwe ngemuva kokutshelwa ukuthi ingane yakhe iyintombazane.
Yize kunjalo ngemuva kweminyaka embalwa, ingane yakhe eseyikhulise njengentombazane waqala wabona izimpawu zomfana kuyo njengoba yaqala yamila amadevu futhi nayo iziphathisa okomuntu wesilisa.
"Odokotela bangitshela ukuthi konke kuzophela uma ejova kodwa ngangilokhu ngizibona izimpawu zendoda kuye," usho njalo.
Njengamanje uDenise uthola usizo usizo lwemali kwabeMalefela Martins Manyane Trust ukuze ezokwazi ukuhlinzelwa isigaba sesithathu sokulungiswa "kwenduku" okubiza imali ephakathi kwengu-R65 000 nengu-R80 000.
"Ngangigqoka iziketi ngisakhula kodwa ngidlala nabafana, yilapho engaqala khona ukubona ukuthi ngihlukile ngase ngiqala nokubuza imibuzo. Ngangihlezi ngicabanga futhi ngikhala njalo. Ngahanjiswa kodokotela benqondo ukuze ngizofunda ukwamukela isimo sami. Ngifuna ukuqhubeka nempilo yami ngiqede nesikole," usho njalo.
Uma umbuka uDenise uyindoda enetshebe kodwa umazisi wakhe uthi uthi ungumuntu wesifazane okwenza izinto zibe nzima.
Umama kaDenise uthi kwakunzima ngisho nokuvula i-akhawunti yasebhange njengoba njalo kwakubuzwa ngobulili bakhe.
UNgqongqoshe wezeMpilo eLimpopo uPhophi Ramathuba uthe uzophawula ngodaba uma esewabonile amabhuku odokotela kaDenise.
"Siyaqala ukuzwa ngento efana nale kodwa siyajabula ngoba sesiyazi ngalo. Sizolubhekisisa udaba lwakhe mase senza konke okusemandleni ukumsiza," kusho uRamathuba.